Teknolojia | TeraNews.net |
Bolts Smart Screw Connection miaraka amin'ny Wi-Fi
Starlink dia namoaka serivisy Portability ho an'ny fiara
Ny analogue amin'ny Internet finday, amin'ny endrika terminal ho an'ny fiara, dia atosiky ny Starlink. Ny serivisy "Portability" dia miompana amin'ny…
Raha jerena fa noforonina tamin'ny taona 3 ny 1995D Movie Maker, dia toy izany ny vaovao. Misy fotoana iray ihany. Tao anatin’izay 26 taona izay, tsy nisy…
Azonao atao ny mividy tariby USB Type-C 2.1 amin'ny fivarotana manokana
Ny fenitra USB Type-C 2.1 dia mbola ho. Nahazo fampiharana lozisialy ny teknolojia natao patanty tamin'ny taona 2019. Na dia maro aza…
USB Type-C no fenitra ho an'ny fiampangana fitaovana ho an'ny 2022
Nankatoavin'ny Vaomiera Eropeana ny fenitra vaovao eo amin'ny tsenan'ny IT. Izy io dia mikasika ny karazana connecteur amin'ny famandrihana fitaovana finday. endrika…
VPN - inona izany, tombony sy fatiantoka
Ny maha-zava-dehibe ny serivisy VPN dia nitombo tamin'ny 2022 ka tsy azo atao ny tsy miraharaha an'io lohahevitra io. Hitan'ny mpampiasa...
Canon EOS R, Rp ary M50 Mark II fakan-tsary tsy misy fitaratra amin'ny 2022
Ny tsenan'ny fitaovana fakàna sary matihanina dia hofenoina vokatra vaovao telo avy amin'ny marika Japoney Canon. Nanomboka ny taona 2021, ny mpanamboatra…
Fanadiovana fanasan-damba UWANT B100-E - mpanadio tasy tsara indrindra
Tsy mahagaga na iza na iza intsony ny fanasan-damba mpanadio. Saika ny fitaovana faharoa eny an-tsena ho an'ny kojakoja fanadiovana ao an-tokantrano dia manana fiasa ...
Metaverse - inona izany, ny fomba hahatongavana any, inona no manokana
Ny Metaverse dia zava-misy virtoaly ahafahan'ny olona mifandray amin'ny fotoana tena izy na amin'ny zavatra,…
Mpilalao firaketana mandeha ho azy Pro-Ject Automat A1
Ny Pro-Ject Automat A1 dia ampahany amin'ny tsipika vaovao amin'ny turntable mandeha ho azy. Kendreny ny...
Beyerdynamic DT 700 PRO X - écouteur ambonin'ny sofina
Ny endri-javatra lehibe indrindra amin'ny andalana vaovao amin'ny headphone DT PRO X feno habe matihanina dia ny STELLAR.45 feo mamoaka feo. Tsy tsotra izany…
Ny fanamafisam-peo JBL Cinema SB190 dia solontenan'ny sokajy vidiny antonony ary avo indrindra amin'ny tsipika SB. Ny endri-javatra lehibe amin'ny JBL Cinema SB190…
1 2 3 ... 16 manaraka
Fiara elektrika compact amin'ny 2022
Smartphone Infinix Zero X Pro - tetika ara-barotra amin'ny teny sinoa
Fetin'ny reny (fialantsasatra) - inona no homena
Fahitalavitra Sony 4K sy 8K - fanombohana tsara amin'ny 2021
Rose Hanbury: resaka fosafosa momba ny ady teo amin'ny fanjakan'i Eropa
TV-BOX X88 PRO 20 (RK3566) - topimaso, famaritana